လစာတိုးပြီ……… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Money & Finance » လစာတိုးပြီ………
Posted by NK on Mar 14, 2012 in Money & Finance | 18 comments
၀န်ထမ်းအားလုံး…. ၃ သောင်းကျပ်
နေ့စား လစား အားလုံး တစ်ရက် 1000 kyats တိုးမြှင့်ပေး ပါတယ်
ငွေကြေးဖောင်းပွမှု နှင့် ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှုကို
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက တာဝန်ခံမှာလား။
လစာ တိုးတဲ့ အကြောင်း သတင်းထဲမှာ ကြားပါတယ်။
သူတို့ တိုးတော့ ကုပ္ပဏိဝန်ထမ်းတွေကလည်း တိုးတောင်းကြမယ်။
လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဖို့ အတွက် အမြတ် တင်မက ၀န်ထမ်းလစာပို ပိုတိုးရှာရတော့မယ်။
ဒီတော့ တက်တယ်ကွာ.. ဘာပြောချင်လဲ.. အကုန်တက်မယ်.. ဒါဘဲ..
တက် ကြ ပါ ။ တက် ကြ ပါ ။
လစာတိုးတာတော့ ကောင်းပါတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းလိုက်တိုးရင်သာ မကောင်းတာ။ သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်းပဲ။
သတ်မှတ်လိုက် ပြီးရော။ ဘယ်လောက်အမောင့်ထက်ပိုရောင်း ဂျေးထဲ ဂျောင်းပဲ..။
လစာ တိုးပြီဆိုတော့ …
မိန်းမ ခိုးလို့ရပြီပေါ့ …
နာက မန်းလေးကို ခိုးပြေးလာမှာနော် ..
အဲဒါ … ညည်းဆီပဲ လာမှာ ..
ခိုး ကြ ပါ ။ ခိုး ကြ ပါ ။
မီးတို့မှာတော့ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေဆဲပါ….
သများတွေ တွက်ဝမ်းသာပေးပါတယ်တော်။ ကုန်ဈေးနှုန်းသာ မတက်ပါနဲ့။
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၇ ရက်၊ (၂၀၁၂ ခုနှစ်) မတ်လ ၁၄ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြေငြာစာအမှတမ် ၁၀၀/ ၂၀၁၂ ဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွင်း နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြသည့် ၀န်ထမ်းများ (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ၀န်ထမ်းများအား စားဝတ်နေရေး သက်သာချောင်လည်မှု ရှိစေရန်အတွက် လက်ရှိလစာအပြင် အပိုထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ် တစ်ဦးလျှင် (ကျပ်သုံးသောင်းတိတိ) ခံစားခွင့်ပြုရန်ကိုလည်းကောင်း၊ အစိုးရဌာန်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ နေ့စားအလုပ်သများများ၏ လုပ်ခကို အလုပ်ချိန် တစ်နေ့ (၈) နာရီအတွက် လက်ရှိသက်မှတ်ထားသော လုပ်ခ (ကျပ်တစ်ထောင့်တစ်ရာတိတိ) အပေါ်တွင် ထောက်ပံကြေး (ကျပ်တစ်ထောင်တိတိ) ကို ထပ်မံခံစားခွင့် ပြုမည်ဖြစ်သဖြင့် နေ့စားအလုပ်သမားများအား နေ့စဉ်လုပ်ခ (ကျပ်နှစ်ထောင့်တစ်ရာတိတိ) ခံစားခွင့်ပြုရန်ကိုလည်းကောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ စ၍ ခံစားခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နွယ်ပင် စာအရ နားလည်ရရင် ၃၀၀၀၀ ကျပ်က တပ်ကိုဘဲ တိုးပေးတာလား ။
အားလုံးကတော့နေ့စားတွေကိုဘဲ တိုးပေး တာပေါ့။
အင်း ….. လစာတိုးပြန်ပြီ ကုန်ဈေးနှုန်းလည်းတက်ပြန်ပြီ ………. တစ်ခုပြောချင်တာက လစားတိုးတာကောင်းပါတယ် ….. အကြမ်းမျဉ်းပေါ့လေ …. တစ်ချို့ဝန်ထမ်းတွေက ကြားပေါက်မရှိပါဘူး အဲ လိုလူတွေအတွက်ကောင်းပါတယ် …….. တစ်ချို့ဝန်ထမ်းတွေက ကြားပေါက်တွေရှိတယ် အဲလိုလူမျိုးတွေ ကတော့မတိုးပေးချင်ဘူးအေ ……… ကိုယ်ကိုတိုင်ဝန်ထမ်းဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတယ် လာဘ်စားတဲ့ဝန်ထမ်း တွေနဲ့လည်း ကြုံခဲ့ဖူးတယ် …….. အားလုံးကို တရားမျှမျှတတဖြစ်စေချင်တယ် ………
လစာနဲ့မလုံလောက်လို့ ကြားပေါက်တောင်းရပါတယ်ဆိုတဲ့ လာဘ်စားဝန်ထမ်းတွေ…….
၃၀၀၀၀ နဲ့ လုံလောက်နိုင်ပါသလားးးးးးးးးးးးးးးး
လာဘ်စားမှုတွေ ရှိနေ အုံးမှာလားးးးးးးးးးးးးး
အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေ အဆင်ပြေသွားတာ ပေါ့ လ်ာဘ်စားနေ တဲ့သူ ကတော့ အဲဒီလောက် နဲ့ ဂရုမစိုက်ပါဘူး စားမြဲ စားနေအုံးမှာ ပါ
တယ်လည်း သနားဖို့ကောင်းတဲ့ ငါပါလားနော်
ဒီက ကော်မင်းတွေကို ဖတ်ပြီး မြည်းတစ်ကောင်နဲ့သားအဖနှစ်ယောက်ပုံပြင်ကို သွားသတိရတယ်။
အကျင့်ပျက် ၀န်ထမ်းများ လက်ရှိလစာအပြင် လာဘ်စားငွေကို
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ စ၍ တိုးမြှင့် စံနှုန်းအတိုင်း
လွတ်လပ်စွာ လာဘ်စား ရန် အဆင်သင့်ဖြစ် ပြီ လား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားခတော့ရသွားတာပေါ့။ နို့မို့ဆိုလခထဲကကားခနှုတ်နေရတာ။ အခုတော့လခတင်းပြည့်ကျပ် ပြည့်ရသွားတာပေါ့။ ကုန်ဈေးနှုန်းသာမတက်ရင်တော့ ကောင်းလှောင့်တေး ကောင်းလှောင့်တေး။
လခ တိုးတောင်းလို့ မရတဲ့ … နင်းပြား company ၀န်ထမ်း တွေမှာတော့ .. :-( … စီးပွားရေး သမားတွေကလဲ .. ဒီအကွက် ကိုချောင်းနေတယ်လို့ ထင်တာပါပဲ ….. အသင်းတွေဖွဲ့ ပြီးထိန်းချုပ်မယ် ဆိုတော့ လဲ .. အဲ့ အသင်းတွေ ကိုယ်တိုင် က ..??? စိတ်လေတယ်။……
ဘ၀ရဲ့ အကြီးမားရည်မှန်းချက် = ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားရရေး (ကျွန်တော့ တစ်ယောက်ထဲ အတွက်ပါ။)